यस्ता छन् मुटु बचाउने सात तरिका - Samata Khabar
१० भाद्र २०७८, बिहीबार ०८:२४
हरेक रात कम्तिमा सात घन्टा सुतौँ। कडा परिश्रम छ भने आठ घन्टा सुत्न सकिन्छ। निद्रा बिग्रिएमा शरीर चल्ने प्रक्रियामा गडबड हुन्छ र मधुमेहले सताउने सम्भावना बढ्छ। निद्रा नपुग्दा धमनीमा क्याल्सियम जम्मा हुने खतरा रहन्छ, जसले धमनी खुम्चिन सक्छ।
रक्तचापको जानकारी अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। उच्च रक्तचापले धमनीलाई कमजोर बनाउँदै लान्छ। १२०/८० देखि १३०/८५ को रक्तचापलाई उच्च मानिदैन। रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्नु भनेको आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त राख्नु हो। यसका लागि व्यायाम, मोटोपना घटाउने, तनाव मुक्त हुने उपाय अवलम्बन गर्नु राम्रो हो।
३. धूमपान नगरौं, सेकेन्डह्यान्ड धुँवाबाट बचौँ
अरूले खाएको धुँवाले पनि तपाईंलाई उत्तिकै असर गरिरहेको हुन्छ। चुरोट खाएको वरिपरि एक घन्टासम्म बस्नाले दिनको दुईदेखि चारवटा चुरोट खाए समान हानि पुर्या‍उँछ। धूम्रपान यसै पनि मुटुरोगको एउटा कारण हो।
४. दैनिक कम्तिमा ३० मिनेट हिँडौँ
व्यायामले मानिसको आयु बढाउन मद्दत गर्छ। साथै, व्यायामले मुटुको धड्कन हरेक दिन राम्रोसँग चलाउन पनि मद्दत पु¥याउँछ। बुढोपना शरीरमा नदेखिनु त यसको प्रत्यक्ष फाइदा भइहाल्यो। त्यसैले दिनको कम्तिमा ३० मिनेट हिँडेर भए पनि स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ।
माछामा पाइने ‘ओमेघा–३’ तेलले मुटु र धमनीको चाललाई चुस्त राख्छ। यसमा पाइने प्रोटिनले मान्छेको मुटुलाई सबैभन्दा धेरै फाइदा गर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ।
आर्थिक कारणले मानसिक तनाव कहिल्यै लिन हुँदैन। तनाबले मान्छेको निन्द्रा मात्र होइन मुटुको काम गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास ल्याउँछ।
गिजामा लाग्ने रोगहरूले कहिलेकाहीँ हृदयघातसम्म गराउन सक्छ। तसर्थ, दन्त स्वास्थ्यको ख्याल गरेर पनि मुटु बचाउन सकिन्छ।